भारतको प्रदूषणयुक्त हावाको असर नेपालमा पनि, प्रदूषण बढ्दै गए लकडाउन हुन सक्ने| Janachaso Khabar
भारतको प्रदूषणयुक्त हावाको असर नेपालमा पनि, प्रदूषण बढ्दै गए लकडाउन हुन सक्ने
काठमाण्डाै । अरब सागरमा बनेको निम्न चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावसँगै प्रदूषणका कारण भिजिबिलिटी घटेको छ । देशका धेरै ठाउँमा तुवाँलो लागेका कारण भिजिबिलिटी घटेको हो।
मौसमविद् निराजन सापकोटाका अनुसार आज भिजिबिलिटी ५ हजार मिटरमा झरेको छ । हिजो अस्ति सात/आठ हजार मिटर हुने गरेको थियो । अहिले हवाई सेवामा भने सञ्चालन भइरहेका छन् । भिजिबिलिटी ३ हजार मिटरसम्म हुँदा उडान अवतरण हुने गरेको छ । मौसम धुम्म भएका बेला र तुवाँलो लागेका बेला भिजिबिलिटी कम हुन्छ । यस्तै, अहिले भारतबाट प्रदूषणयुक्त हावा नेपाल आउन थालेकाले पनि भिजिबिलिटी स्वात्तै घटेको मौसमविद् निराजन सापकोटाले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार भारतको दिल्लीको वायु प्रदूषणले अहिले नेपालमा असर पर्न थालेको छ । तर, दिल्लीको प्रदूषणयुक्त हावा नेपालमा प्रवेश गरेको बारे वातावरण विभागले भने कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन । मौसमविद्ले भने प्रदूषणको असर देखिन थालेकाले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रदूषणबाट बच्न घर बाहिर हिँडडुल गर्दा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रदूषणको मात्रा बढेका बेला मर्निङवाकमा जानु उपयुक्त नहुने पनि विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यस्तै, मौसमविद्ले भिजिबिलिटी घटेकाले गाडी चलाउँदा र हिँडडुल गर्दा पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् । भिजिबिलिटी कम हुँदा दुर्घटनाको जोखिम धेरै हुन्छ । बिस्तारै गाडी चलाउन र हिँडडुल गर्दा फुटपाथको प्रयोग गर्न मौसमविद्को आग्रह छ ।
जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको हो । डा. उप्रेतीले हिजाे बुधवार बेलुकादेखि नै काठमाण्डौलगायत देशभरका केही सहरमा वायुको गुणस्तर कम भएको बताउनुभयो । उहाँले दक्षिण भारतमा दुई सय १५ मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको र भारतमा देखिएको प्रदूषण उत्तरतर्फ सर्दा नेपालमा असर पर्ने बताउनुभयो । हिजोदेखि आजसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने रेड अलर्ट छ, हावाको खतरा तहमा पुगिसकेको छ, अहिलेको जस्तै हो भने काठमाण्डाैमा पनि यसको असर बढ्न सक्छ, यसले निम्त्याउने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगदेखि मानव स्वास्थ्यमा यसको ठूलो असर देखिन्छ, यसले ज्यान पनि जान सक्छ ।’
डा. उप्रेतीले वायु प्रदूषण कम गर्न धुलोलाई घटाउने गरी नगरपालिकाहरूले पानी छर्कने, उद्योगहरू केही दिनका लागि बन्द गर्ने र गाडी बन्द गर्ने लगायतका काम बेलैमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वायु प्रदूषण बढ्दै गएमा देशव्यापी लकडाउन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । डा. उप्रेतीले वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनेदेखि विभिन्न रोग निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो ।